5 Waxyaabood Oo Halis Ah Oo Dhaca Marka Xaaskaaga Aad Ku Hor Canaanatid Caruurta - Aayaha
Shabakadda ka faaloota arrimaha bulshada ee Aayaha Online, ayaa maanta idiin soo gudbineysa dhibaatooyinka ka dhasha inaad xaaskaaga ama seygaaga kuhor aflagaadeysid caruurtaada hortooda.
Waxaad sameysay tusaale xun
Caruurta waxyaabo badan ayay ogaadaan marka ay weynaadaan mana ogid inay wax kaa baranayaan, waalidka waa barbaariyaha caruurta, marka waad sawiran kartaa waxyaabaha ay kaa baaranayaan marka aad hooyadood ku hor aflagaadeysid ama labadiinaba aad isku hor aflagaadeysaan.
Waxaad hoos u dhigtay kalsoonidii xaaskaaga ama ninkaaga
Markii aad xushmad dareeysid lamaantaada isla markaana kuhor bahdishid caruurtaada waxaad siisay dareen ah in xusmad darrada ay caadi tahay, sidaa darteed caruurtaada meeshaas ayay ka baranayaan xushmad darrada.
Waxaas dhaawacday caruurtaada
Marka aad caruurtaad hooyadood ku hor aflagaadeysid ama aabohood canugaaga ama caruurtaada waxay dareemayaan dhaawaca arrintaas waana dareen saameynaya marka ay weynaadaan ama koraan.
Caruurtaada waxay bilaabayaan inay dhinac la saftaan
Marka ay caruurtaada weynaadaan ama koraan waqti dheer kuma qaadaneyso inay dhinac la saftaan intii ay jeclaan lahaayeen labada walaid, waxay jeclaanayaan mid kamid ah waalidiinta midka kalena waa nacayaan
Waxaad bur burisay midnimadii qoyska iyo hooyga
Arrinka kale ee imaanaya ayaa ah kala qeybsanaan, qoyskaagii mideysnaa isna jeclaa iminka wey kala qeybsameen waxaana arrintaas sabab u ah hadallada fudud ee aad afka uun ka tiri.
Inaad aflagaadeysid lamaantaada ama lamaankaaga waa wax dhinac walbo u qaldan waxayna kasii darantahay marka aad ku aflagaadeysid caruurtaada hortooda.
Previous articleFour common types of drama in relationships
Next article8 Waxyaabood Oo Lamaanaha Farxsan Ay Sameeyaan Kahor Inta Aysan Seexan
Aayaha editor - October 16, 2018 0
While the increased risk of health conditions like cardiovascular disease, cancer and kidney disorders have been linked with diabetes and early death, a new...
Hanashada Qalbiga Gabar: 5 Sirood Oo Kaa Caawinaya Inaad Hanato Qalbiga...
Saddex arrimood oo kaa caawinaya inaad si dhakhso ah usoo jiidato...
Saddexda Sheey Ee Jacayl Oo Idil Uu Ka Koobanyahay
Shantaan Calaamadood Hadaad Gabadha Ku Aragto Waqtiga Ayay Kaa Lumineysaa Ee...
4 Xaqiiqo oo ku saabsan xiriirka oo ay tahay in qof...